Cudurada Cirridka | Caafimaadka | somaanta
Dr. Cabdisalaam Xuseen oo ka warbixinaya cudurada ku dhaca CIRRIDKA & Daaweyntooda
Haddii aan isku dayno in aan faah-faahin ka bixino xannuunada ku dhaca cirridka iyo waxyaabaha keena guud ahaan, dad badan oo ku nool dunida ayaa waxa ay inta badan cabasho joogta ah ka muujiyaan Dhiiga ka yimaada Afka ama Ilkaha, Ur Qadhmuun oo ay ka dareemaan Afka, Cadayga oo ka dhiijiya (dhiig ka keena) Afka, Neef Qadhmuun oo qofku uu dhibsado iyo Cuntooyinka kulul oo dhiba. Waxyaabahaasi inta badan waxa ay ka yimaadaan oo sabab u ah cirrid-xannuunka, haba jiraan wax kale oo keenaaye, laakiin Cirrid- xannuunka ayaa ugu mihiimsan. Haddaba inaga oo qodobadaasi oo dhan mid mid u kala qaadi doona aan ku horayno inaan weydiino Dr. Cabdisalaam Xuseen Cawaale oo ku takhasusay cudurrada Afka suáasha ah:
Maxaa keena Cirrid-xannuunka?
Dr. Cabdisalaam: Waxaa jira in Afka qof kasta oo Bini aadam ah ay ku nooshahay in ka badan 400 oo nuuc oo Bacterio ah (Ili ma aragto) ah, kuwaasi oo khasaare iyo faaíido labadaba u leh Biniaadamka. Noocyada Bacteriada ah qaar waxaa loo yaqaan (Aportunist) ama kuwo qofka ka faaiidaysta markasta oo uu difaaca jidhkiisu hoos u dhoco isla markaana ku keena xannuuno kala duwan Afka qofka. Sababaha ugu badan ee cirid-xannuunka keena ha jiraan in difaaca jidhka qofku hoos u dhaco, laakiin waxa jira sababo ka horreeya oo uu qofku ku difaaci karo ama kaga hortagi karo in ciridku dhiigo, waxaana ka mid ah: In nadaafadda afka ama Cadayga oo uu qofku ka cadaydo cunto kasta oo uu cuno ugana cadaydo si aad u fiican. Waxa jira wax loo yaqaan(Plaque) ama Af-Soomaali (Huuro) waa wasakha fuusha ilkaha oo qof kasta dareemi karo xilliga aannu cadayanin taasi oo ka dhalata Cuntooyinka uu qofku qaato, middaasi ayaa waxa ay dhashaa ama ay noqotaa wax loo yaqaan (Calculas) Waa Wasakh adkaata oo ku dhegta ilkaha ama ku noqota dhagxaan ad-adag oo aanu xataa cadaygu goyni karin haddii aan laga sifaynin ilkaha oo aan loo tegin dhakhtar soo sifeeya.
Wasakhda adag ama dhagxaantaasi waxa ay kala dhex galaan ciridka iyo ilkaha halkaasi oo ay cuntada badankeedu fadhiisato kuna quudato Bacteriadu keentana Barar Ciridka, kabacdi Ciridka waa sii dhaafaa Xannuunkaasi waxaana uu u gudbaa lafta haysa Ilkaha waxa halkaasi uu ka bilaabma in Ilkuhu soo Qoto baxaan ama Jiriddii adkayd dhamaato Iligiina dhaqdhaqaaq bilaabo kadibna si sahal ah u soo dhoco.
Suáal kale oo aan weydiinay Dr. Cabdisalaam ayaa waxay ahayd: Dhiiga ka yimaad cirridka maxaa sababa?
Dr. Cabdisalaam: Waxa Sababa iyada oo aan Cadayga si fiican looga cadayanin wasakhda ilkaha iyo cirridka u dhaxaysa ama dhagxaanta ku noqotay oo aan aad looga si faynin. Xasuusnow in aanad kaga jari karin wasakhdaasi cadayga laakiin aad u tagto Dhakhtar ilkood si uu kaga caawiyo kadibna aad 6 bilood oo kasta joogto uga sifayso.
Suáal: Xidhiidh ma leeyiiin Xannuunada cirridka iyo xannuunka Suuska ilkaha?
Dr. Cabdisalaam: Haa, waa leeyihiin sababta oo ah xannuunka ku dhaca Cirridka waxa uu keenaa in uu kala fogeeyo ciridka iyo Iliga oo uu siiyo firaaqo cuntadu in ay dhex gasho labada dhexdooda kaddibna ay meeshaasi hoy u noqoto Bacteria-dii keenaysay Suuska kana Samaysato waxa loo yaqaan ( Pocket) ama God, Hoy.
Suáal: Keebaa fiican Cadayga qoriga ah ee Soomaalidu isticmaasho iyo Brushka?
Dr. Cabdisalaam: Su´aashani jawaabteedu waxa weeyi horta cadayga laftiisa sida loo isticmaalaa sax ma tahay ayaa iswaydiin leh, waxaan odhan karnaa dhamaanba sida Soomaalidu u cadayataa waxaad moodaa in ay khilaafsan tahay sida ugu fiican, waayo waxyaalaha Waalidku inoo sheegay ayuun baan qaadan jirnay, laakiin Dhakhtar ilkood lama aynaan tashan jirin markaa waxan odhan karnaa sidaan oo kale uma ay jirin dhakhaatiir Ilkood waalidkuna sida ay la tahay ayuun buu wax inoogu sheegaayay qaladna ma uu lahayn ee garashadiisa ayuunbay ahayd, mana odhan karno Brushka ayaa ka fiican cadayga waayo dadkeena dhammaan Brush ma wada heli karaan waxaanse u kala qaadaynaa 3 xaaladood:
A. Cadayga aad u calali haddii aanad haysanin Brush Cadayga u yeel Bull ama Timo badan oo ka yareeya adayga marka aad in badan calaliso ilkaha, una cadayo Gudub oo ha u cadayin Dherer, isku day in aad wareejiso oo ilig kasta aad ku nasiso adiga oo aan u adeegsanaynin Xoog in aad wax kaga goyso ilkaha.
B.Haddii aad haysato Brush u isticmaal sida aan kor ku sheegnay ee cadayga oo kale.
C. Caday ama Brush kan aad rabto hayso isticmaal daawada Ilkaha oo ku cadayo waxa ay siisaa Ilkaha Awood badan,waxa ay ka difaacdaa Bacteriada qaarkeed. Tan kale waa nin iyo karaankii oo dadku isku wada awood maaha ee Brush qofkii heli kara ha waydiiyo Dukaamada Ama Farmashiyada (oft teeth brush ) ama Brushka nooca jilicsan waydii (Dental Floss) ama Dunta lagu Findhicisho ee daawada leh ilkahana dhexdooda ka saarta wasakhda ama Hilibka kolka qofku cuno ka dhex gala si aad ugaga maarantis Findhicilkii qoriga ahaa.
Suáal: In si xoog ah loo Cadaydo (loo Rumaysto) dhib miyaa ku jira?
Dr. Cabdisalaam: Haa, dhib ayaa ku jira waayo ilkaha xoog wax lagagama jaro ee Qunyar ayaa loo cadayaa oo degdega ayaa keena in uu qofku is-yidhaa xoog wax ugaga jar. Akhriste Dhagxaan ma aad cunin ee Cunto jilicsan ayaad cuntay maxaa kalifay in aad xoog u adeegsato! Jooji deg dega aad u cadayanayso sii Ilig kasta wakhtigiisa oo ilaa 15 daqiiqo cadayo ugu yaraan haddii kale waxa aad dhaxlaysaa in Ciridku ku faqmo hoos kuu dhaadhoco ku xannuuno , uu ku bogsan waayo, kaddib ilkuhu caddaankii waayaan oo ay kaa casaadaan ilayn cadad ayaad ka jartay iligii oo awooddiisii ayaad khafiifisaye.
Dr. Cabdisalaam oo suáalihii shabakadda www.somaanta.com ay weydiisay intaas uga jawaabay ayaa haddana jeclaystay inuu wax inooga ifiyo dadka uu inta badan ku dhaco cirrid-xannuunka & da´dooda, wuxuuna yiri "da´da qaan-gaadhka carrurta oo ah xilliga ay is-beddelayaan dheecaano badani waa ku dhacaa dhallinyarada, sidoo kalena wuxuu ku dhici karaa dadka waaweyn rag & dumarba" ayuu yiri Dhakhtarka oo intaas ku daray in cirrid-xannuunku uu ku dhaco dumarka Uurka leh marka difaacoodu hoos u dhaco.
Haddaba sidee looga daaweyn karaa qofkii uu ku dhaco cirrid-xannuun?
Dr. Cabdisalaam: U tag Dhaqtarka kuugu dhow ee ilakaha oo la tasho, Ogoow dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in la cuno Vitamic-C. Ma aha sidaa waligaa ha u dhawaanin Vitamin-C afkii ayaaba diirkii ka qaadmayaa oo ku xannuunaya isagana waa ku sii gubayaa sidee suuragal u tahay arrintaasi, halkeese ka keenen dadka bixinaya taladaasi! Waa qalad arrinkaasi u tag kaliya Dhakhtarka aqoonta u leh Xannuunkaaga.
Wabilahi Tawfiiq. Dr. Abdisalam Hussein
Waa maxay Stress?
Dr. Warsame oo ka hadlaya qaaxada
Dr. Warsame oo aan ka waraysannay UUNSIGA